Mpanamboatra sy mpamatsy volavolan-tsolika WPC - Sina WPC foam board Factory
Ny takelaka plastika WPC Sintra, izay antsoina ihany koa amin'ny solaitrabe vita amin'ny plastika vita amin'ny Wooden, dia sokajy famoronana vita amin'ny tabilao vita amin'ny busa vita amin'ny PVC. Ny takelaka fisorohana WPC dia novokarina tamin'ny resina PVC sy vovoka hazo izay mifangaro amin'ny refy sasany, nampiana fanampin-javatra manokana avy amin'ny raikipohy nandroso, nasiana fo ary nesorina tamina hafanana ambony farany hamoronana ravina.
WPC Sintra Plastika Sheet dia manana ny hevitry ny hazo, fa izy io dia tantera-drano sy afo. Izy io dia tsara fanoloana hazo, plywood, fisakafoanana ary koa Medium Density Fiberboard (MDF).
volontany PVC 5mm volontany
Ny takelaka Brown PVC 5mm dia karazana tabilao WPC. Ny takelaka vita amin'ny plastika vita amin'ny hazo dia karazana hazo (cellulose hazo, cellulose zavamaniry) ho fitaovana fototra, fitaovana polymer thermoplastic (plastika) ary fitaovana fanodinana, sns, ary avy eo afangaro tsara. Ny haitao haitao avo lenta sy milamina amin'ny tontolo iainana vita amin'ny fanaingoana sy ny famolavolana ireo fitaovana famolavolana ireo dia manana toetra sy toetra mampiavaka ny hazo sy ny plastika. Izy io dia karazana fitaovana fitambarana vaovao izay afaka manolo ny hazo sy ny plastika.